Soomaali / Barashada Luqadaha Badan
Barnaamijka U Diyaarinta Kuleejka iyo Shaqooyinka
Barashada Luqadaha Badan
Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah
Barnaamijyada Waxbarashada Gaarka ah
Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah iyo Barnaamijka Aag walba ee 2018-19
Barnaamijyada Iskuulka ka-hor iyo Ka-dib
Barnaamijka Taageerada Ardayda
Khariirada Dugsiyada Hoose
Khariirada Dugsiyada Dhexe
Khariirada Dugsiyada Sare
Su’aalaha Had iyo Jeer la’is weydiiyo
Soo dhawaynta Dhaqamada kala duwan ee Ardaydeena
Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxaa dhigta ardayda ugu badan ee ka kale yimid qoomiyado kale duwan marka loo fiiriyo wadanka guud ahaan. Ardayda iyo qoysaskoodu waxay ku hadlaan ilaa in ka badan 100 luuqadood iyo lahjadood. Qaar ardaydeena ka mid ah waxay ku hadlaan labo, sadex iyo waliba afar luuqadood oo kale duwan.
Barnaamijka Dadka Barta Luuqada Ingiriisiga(EL)
Barnaamijka luuqadaha ee xanaanada ilaa fasalka 12-aad wuxuu siinayaa ardayda gurigooda lagaga hadlo luuqad aan Ingiriis ahayn fursada ay ku kobciyaan Ingiriiskooda waxna ku bartaan. Boqolkiiba 30 qiyaastii ardayda Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxaa gurigooda lagaga hadlaa luuqad aan Ingiriisi ahayn. Tacliintu waxay xoogga saaraysaa in ardaydu kordhiyaan aqoontooda luuqada Ingiriisiga. Waxbarashada waxaa lagu gaarayaa barid ku dhisan iskaashi, dar-dargalin barnaamijka luuqada, iyo in maadooyinka muhiimka aha lagu baro luuqada Ingiriisiga sida xisaabta sayniska, iyo cilmiga bulshada. Sidoo kale waxaa jira barnaamijyada English Now! Iyo Imagine Learning ayaa iskuullada qaarkood laga helayaa. Macalinka waxbarashada guud iyo kan luuqada Ingiriisiga bara ayaa inta badan si wada jir ah wax u bara ardayda si ay si joogtaha ardaydu ula macaamiiltamaan ardayda fasalkooda ee sida buuxda ugu hadasha luuqada Ingiriisiga. Wixii faah faahin ah soo wac 651-767-8320.
Caruurta ku cusub wadanka ee u baahan in ay soo kobciyaan tacliintood luuqada Ingiriisiga, waxay leeyihiin khiyaar ay kaga qaybqaataan Mac’hadka Luuqada. Ardayda fasalada 1-aad ilaa 12-aad waxay la dhaqmaan bulshada dugsiga si looga caawiyo xiriirka iyo calaaqadka ardayda Ingiriisiga ku hadasha ee da’dood ah. Ardayda Machadyada luuqada waxay taageero muhiim ah ka helaan macalimiinta dhiga Ingiriisiga iyo macalimiinta kale ee waxbarashad guud si ardayda loo siiyo waxbarasho ku dhisan baahidooda. Ardaydu waxay helaan nidaam wax-barid oo ku salaysan baahidooda. Barnaamijkan shaqada badan leh wuxuu ardayda ka caawinayaa in ay si degdeg ah u dhisaan aqoontooda luuqada Ingiriisiga taas oo u diyaarinaysa guusha waxbarasho. Akhbaar dheeraad ah, wac 651-767-8320.
Barnaamijkan waxuu ardayda ka caawinayaa barashada sidii ay ula xiriiri lahaayeen dadka dhaqamada kale, in ay balaariyaan argtidooda ku aadan aduunka, iyo in ay kobciyaan luuqadooda iyo dhaqankooda. Barnaamijkan wuxuu ka baxaa dugsiyiyada sare. Luuqadaha uu ku boxo waxaa ka mid ah Chinese(Mandarin), French, German, Hmong, Japanese, Lakota/Dakota, Latin, Ojibwe, Russian, iyo Spanish. Sidoo kale waxaa la helayaa barnaamijkaAmerican Sign Language (ASL).
Barnaamijyada Luuqada iyo Dhaqanka Dheeraadka ah: Barnaamijkan wuxuu ardayda, waalidiinta, shaqaalaha iyo qaybaha kale ee bulshada siinayaa adeegyo iyo fursado waxbarasho oo kale duwan.
Barnaamijka Xoojinta Luuqada Hmong-ka wuxuu ardayda oo dhan siinayaa fursad waxbarasho, iyagoo ilaalinaya isla markaasna horumarinaya dhaqanka iyo luuqada Hmong ah. Barnaamijka waxaa laga heli karaa Phalen Lake Hmong Studies iyo Dugsiga Jackson Elementary iyadoo loo marayo barnaamijka Barashada Hmong ah iyo Hmong Dual Language; sidoo kale Dugsiyada Battle Creek Dhexe, Harding Sare iyo Washington Technology iyadoo loo marayo fasalada dhaqanka iyo luuqada Hmong ah. Akhbaar dheeraad ah, fadlan la xiriir iskuullada bixiya barnaamijka.
Latino Consent Decree (LCD) Barnaamijkan wuxuu diirada saaraa ardayda Latinada ah ee baranaya Luuqada Ingiriisiga iyadoo loo marayo barnaamijka taageera barashada labda luuqadood, tacliinta barashada Isbaanishka, iyo dhaqanka Latiinada. Akhbaar dheeraad ah,wac 651-767-8320.
Fasalada Luuqada iyo Dhaqanka Soomaaliga wuxuu ardayda siinayaa fursada in ay ku xirmaan dhaqankooda iyagoo waliba baranaya oo kobcinaya aqoonta iyo fahamka dhaqamada kale. Waxaa barnaamijkan hada bixiya Dugsiga Hoose ee Highwood Hills. Akhbaar dheeraad ah, wac 651-767-8320.
Barnaamijka Xoojinta Luuqada Karen-ka: barnaamijkan wuxuu siinayaa ardayda Kuriyaanka ah fursada ay ku bartaan qorista iyo akhriska luuqada kuriyaanka, iyagoo ka wacyigalinaya ardayda kale fahamka iyo dhaqanka Kuriyaanka. Akhbaar dheeraad ah, wac 651-767-8320.
Barnaamijka Waxbarashada ee American Indian-ka wuxuu taageeraa dhaqan wanaaga iyo helida khibrad waxabarasho sare. Waxaa laga heli karaa dugsiyada degmada Saint Paull oo dhan manhaj iyo adeeg waxbarasho oo barnaamijkan la xiriira, sidoo kale adeegyadan waxaa laga heli karaa barnaamijka barashada American Indianka ee American Indian Magnet iyo Dugsiga Sare ee Harding. Akhbaar dheeraad ah, wac 651-293-5191.
Barnaamijyada Labada Luuqadood la isla Baranayo
Goolka barnaamijkan waa in ardaydu noqodaan kuwa ku hadla oo qora laba luuqadood, labo dhaqana yaqaana.
Ardayda labada luuqad isla baranaysa waa in ay:
Fahmaan, ku hadlaan, akhriyaan oo ay qoraan luuqad kale.
ku qaabilaan dabeecad wanaagsan dadka ku hadla luuqadaha kale ee dhaqamada kale leh.
Helaan xirfado iyo aqoon maadooyinka muhiimka ah sida akhriska, qoraalka, xisaabta iyo seyniska iyagoo ku baranaya luuqad kale.
Barnaamijka halka-dhinac ah(one-way) ee luuqadaha la isla baranayo, ardayda ku hadasha luuqada Ingiriisiga ayaa waxay wax ku baranyaan waxbarashada luuqad kale waxyna noqonayaan kuwo si fiican u yaqaana luuqadaas. Barnaamijkan waxaa hada lagu bixiyaa French, Mandarin ama Spanish. Hoos ka fiiri dugsiyada bixiya barnaamijkan.
Barnaamijka labada-dhinac (dual) ee luuqadaha la isla baranayo, ardayda ku hadasha luuqada ingiriisiga iyo arday ku hadasha luuqad kale ayaa waxay isla baranayaan. Fasalada oo dhan waxay maadooyinka waxbrashada lagu qaadanayaa labo luuqo. Barnaamijkan waxaa lagu bixiyaa Hmong iyo Spanish. Hoos ka fiiri dugsiyada bixiya barnaamijkan.
Su’aalo dheeraad ah oo la xiriira barnaamijyada luuqadaha ee Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul, wac 651-767-8320.